काठमाडाैं : हलिउड, बलिउड र कलिउडमा नायिकाको पहिरनलाई लिएर विभिन्न चर्चा–परिचर्चा हुन्छ। हलिउड र बलिउडमा कुनै नायिकाले छोटा, वक्षस्थल देखिने वा पारदर्शी लुगा लगाएको खण्डमा हट नायिकाको संज्ञा दिइन्छ।
तर, कलिउडमा त्यही कुरा विवादको विषय बनिदिन्छ। साथै, नायिकाहरु चर्चाका लागि आफै मिडियालाई खुराक दिइरहेका त हुँदैनन् भन्नेबारे पनि बहस हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यो सत्य पनि सावित भएको छ। यहाँ त्यस्तै केही नायिका र तस्बिरबारे चर्चा गरिएको छ।
नायिका रेखा थापा आफ्नो ग्लामरस भूमिकाका कारण नेपाली सिने क्षेत्रमा जम्न सफल नायिका हुन्। यतिसम्म कि कुनै समय दर्शकले रेखाको उपनाम नै ‘देखा थापा’ राखिदिएका थिए। झन्डै २ दशक नेपाली सिने क्षेत्रमा बिताएकी रेखा एक दशक पहिरनकै कारण चर्चामा आइन्।
२. सुष्मा कार्की
सुष्मा कार्की नेपाली सिने क्षेत्रमा नायिका भन्दा बढी ‘आइटम गर्ल’का रुपमा चिनिइन्। अभिनयभन्दा पनि उनी वक्षस्थलमा खोपिएको ट्याटु र ड्रेसअपका कारण बढी चर्चामा रहिन्। सुष्मा वक्षस्थलको ट्याटु देखाउन वक्षस्थल नै देखिने लुगा लगाएर हिँडिन्। उनका यस्ता तस्बिर रहेकपटक मिडियामा गसिप बने।
त्यसभन्दा पनि बढी उनको विकिनी अवतारले चर्चा पायो। २०७४ सालको मंसिरको जाडोमा ‘स्विमिङ पुल’मा विकिनी अवतारमा तस्बिर खिचेर उनले आफ्नै फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिन्।
३. प्रियंका कार्की
‘नाई नभन्नु ल २’को सक्सेस पार्टी चल्दै थियो। प्रियंका कार्कीको भित्री बस्त्र देखियो। यस विषयले मिडियामा हंगामा नै मच्यायो। २०७१ साउन महिनामा भएको यो घटनापछि प्रियंकाले फेसबुकमा पत्रकारले फोटोशपमार्फत भित्री बस्त्र देखिनेगरी फोटो बिगारेको आरोप लगाइन्।
४. करिश्मा मानन्धर
करिश्मा मानन्धर पहिरनका हिसाबले धेरै विवादमा नआउने नायिका हुन्।
५. सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह
सम्राज्ञी पहिरनका कारण बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छिन्। उनलाई पहिरनकै कारण ‘बोल्ड र सेक्सी’ नायिकाको रुपमा समेत लिने गरिन्छ। उनको पहिरले बेलाबेला विवाद र चर्चा पनि हुने गरेको छ। यसमध्ये सम्राज्ञीको विकिनी अवतार पनि एक हो।
२०७४ मंसिरमा फिल्म ‘नाई नभन्नु ल’ लिएर अष्ट्रेलिया पुगेकी साम्राज्ञी त्यहाँको समुन्द्री तटमा विकिनीमा देखिएकी हुन्। त्यस्तै, २०७४ माघमा सम्राज्ञीले वक्षस्थलको तल्लो भागमा खोपेको ट्याटुको फोटोले पनि निकै चर्चा पायो।
उनले फिलिपिन्समा खोपाएको ट्याटु देखाउन आफूले लगाइरहेको लुगा बटारेकी थिइन्। यसो गर्दा उनको वक्षस्थल पनि देखिएको थियो। यो तस्बिरको सामाजिक संजालमा निकै आलोचना भएको थियो।
सम्राज्ञीका यस्ता किस्सा धेरै छन्। गत वर्ष नेफ्टा अवार्डमा भाग लिन दुबई पुगेकी उनी बार्डरोब मालफंशन अर्थात लुगाले दिने धोकाको शिकार भइन्। भित्री बस्त्र देखिएपछि सम्राज्ञीको तस्बिर एकाएक सामाजिक संजालमा भाइरल बन्यो।
६. नम्रता सापकोटा
२०७४ मंसिरमा नम्रता एक कार्यक्रमका लागि युएई पुगेकी थिइन्। गोप्य अंग देखिने पहिरनमा सजिएकी नम्रतालाई कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो रातो गाउन सम्हाल्नै धौ–धौ भयो। क्यामेराहरु उनको वक्षस्थललाई फोकस गर्दै तस्बिर कैद गर्नमा ब्यस्त भए।
उनको तस्बिरले सामाजिक संजाल र मिडियामा राम्रै चर्चा पायो। सकारात्मक तथा नाकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आए तापनि फिल्मी क्षेत्रमा नवनायिकाको रुपमा उदाएकी नम्रता गसिप बनेर चर्चामा आउन सफल भइन्।
७. गरिमा पन्त
फिल्म ‘झोला’मा अभिनय गरेर उत्कृष्ट अभिनेत्रीको उपाधी पाएकी गरिमा पहिरनका हिसाबले निकै सतर्क नायिका मानिन्छिन्। उनले आफ्नो करियरमा रियल होस् या रिल लाइफमा आलोचना हुने पहिरन लगाइनन्।
तर, जब उनी फिल्म बृत्तबाट टाढा भइ हरि थापासँग बिहे गरेर बेल्जियम हानिइन् तब उनको हट अवतार देखिन थाल्यो। यतिसम्म कि गरिमा विकिनीमामात्र होइन पारदर्शी र वक्षस्थल देखिने पहिरनमा सजिन थालिन्। पछिल्लो उनको पहिरनको सामाजिक संजाल र मिडियामा निकै चर्चा हुने गरेको छ।
८. शिल्पा पोखरेल
५ वर्षअघि फिल्म ‘लज्जा’को समयमा शिल्पा पहिरनका कारण चर्चा आइन्। आफूले लगाएको गाउन सम्हाल्न नसकेपछि उनको भित्री बस्त्र देखियो। तस्बिर पत्रकारको क्यामेरामा कैद भएपछि सामाजिक संजालमा भाइरल बन्यो। त्यसपछि शिल्पाले आफूलाई सम्हाल्दै आएकी छन्।
पूजा शर्मा बेलाबेलामा चर्चामा आउन रुचाइरहने नायिका हुन्। ३ वर्षअघि ‘प्रेमगीत’को सफलतापछि उनको एउटा तस्बिरको निकै आलोचना भयो। एलजी फिल्म अवार्डमा सहभागी भएकी पुजा आफूले लगाएको पहिरनका कारण चर्चामा आइन्।
सो पहिरनमा पुजाको वक्षस्थल देखिएको थियो। जुन तस्बिरले सामाजिक संजाल र मिडिया ततायो। सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने उनको तस्बिरको बेलाबेला चर्चा भइरहन्छ।
१०. वर्षा राउत
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको तस्बिर हो वर्षा राउतको। चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ प्रमोशनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी वर्षाले एक समारोहमा लगाएको पहिरनले १ साता बितिसक्दासमेत चर्चा समाइरहेको छ। साथै, वर्षा सामाजिक संजालमा समेत ट्रोलको शिकार हुन पुगिन्।
शुक्रबार साँझ सिड्नीमा आयोजित चलचित्रको विशेष शोमा वर्षा वक्षस्थल देखिने पहिरनमा सजिएकी थिइन्। सभ्य पहिरन लगाउने नायिकाको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएका कारण पनि वर्षाको यस्तो अवतारले उनका फ्यान निराश भएका थिए। धेरैले वर्षाको पहिरनलाई स्क्यान्डलका रुपमा लिएका छन्।